FIRONGATRY NY COVID-19: Handray fepetra ny Filankevitry ny Minisitra anio – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:25
Hisy ny fakana fepetra ho ataon'ny Fanjakana.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FIRONGATRY NY COVID-19: Handray fepetra ny Filankevitry ny Minisitra anio
FIRONGATRY NY COVID-19: Handray fepetra ny Filankevitry ny Minisitra anio
Tsy nisy tsy nahatsikaritra ny rehetra tato anatin’ny roa herinandro farany izay fa nahitana fiakarany be ny isan’ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus eto Madagasikara. Inona àry no fepetra horaisin’ny Fanjakana? Hiditra amin’ny Hamehana ara-pahasalamana indray ve? sa hiverina amin’ny fihibohana ? na ihany koa hiverina hikatona indray ny sisintany? Anio mandritra ny Filankevitry ny Minisitra manokana no hamaritana izay fepetra horaisina momba izany, hoy ny Filoha Andry Rajoelina omaly.
Lucien R. 15 décembre 2021
Tsy nisy tsy nahatsikaritra ny rehetra tato anatin’ny roa herinandro farany izay fa nahitana fiakarany be ny isan’ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus eto Madagasikara. Farany teo, tafiakatra 994 ny isan’ireo tranga vaovao tao anatin’ny herinandro monja. Inona àry no fepetra horaisin’ny Fanjakana? Hiditra amin’ny Hamehana ara-pahasalamana indray ve? Hiverina amin’ny fihibohana indray ve? Hiverina hikatona indray ve ny sisintany? Sa inona no fepetra horaisin’ny Fanjakana. Omaly, nandritra ny fitokanana ny asa fanitarana ny sampana Vonjy Aina etsy amin’ny CHUJRA etsy Ampefiloha no nanambaran’ny Filohan’ny Repoblika fa hisy Filankevitry ny Minisitra manokana amin’ity anio ity, izay hiresaka manokana ny momba ny firongatry ny Covid-19 eto Madagasikara, sy ireo fepetra mety horaisina. Na izany aza, nilaza ny Filoha Andry Rajoelina omaly fa raha ny antontanisa azo tamin’ity herinandro ity dia efa nahitana fihenany kely ireo tranga vaovao. Noho izany, mbola ilàna fandinihina tsara ireo fepetra mifanaraka amin’ny zava-misy eto Madagasikara.
Filitiana eny anivon’ny CSB II
Na izany aza, mandrapiandry izay fepetra horaisin’ny Filankevitry ny Minisitra anio, efa nisy ihany koa lamina noraisin’ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, izay nampahafantarina omaly. Ho fanapahana ny rojom-pifindrana sy hahafahana mitily haingana ireo olona ahiahiana fa mitondra ny tsimokaretina covid-19, dia isan’ny fanapahan-kevitra vaovao noraisin’ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ny fanaovana fitiliana Covid-19 eny anivon’ny CSB II. Ny Faritra Analamanga sy Vakinankaratra no nanombohana izany, araka ny fanazavana. Miisa 18 ireo CSB II mandray ity fanaovana fitiliana ity raha ny eto Antananarivo. Ireto avy kosa ny mandray izany ho an’ny Faritra Vakinankaratra: CSB II Ambalavato, CSB II Ex CSS, CSB II Antsinanantsena, CSB II Ambohimanarivo, CSB II Tsivatrinikamo, CSB II Mandraikeniheny.
Nanamarika ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka fa anjaran’ny Dokotera mpitsabo no mamaritra ny fanaovana fitiliana ny marary iray, araka ny fizaham-pahasalamana ataony. “Mitohy araka izany ny ezaka ataon’ny Fitondram-panjakana ankehitriny iarovana antsika vahoaka manoloana ity valanaretina ity. Entanina mandrakariva isika hanaraka ireo lamina napetraka”, hoy ny fampitam-baovao.
MGR GABRIEL RANDRIANANTENAINA: Eveka vaovaon’ny Diosezin’ny Tsiroanomandidy
TETIKA FANALANA NY FILOHA: “Mivavaka mafy mba tsy hahafehezana ny aretina ny mpanohitra”
FARITRA IHOROMBE: Hampanarahan-dalàna ireo mpisehatra amin’ny tontolon’ny Harena an-kibon’ny Tany
FANAMBARAN’I PAPA FRANSOA –LGBT : « Horonantsary natambatambatra no naparitaka », hoy ny Kardinaly Tsarahazana
ADY AMIN’NY KERE: Hapetraka ao Amboasary ny « centre opérationnel de coordination »